Mutsvangwa dreams of a stable Zimdollar - Bulawayo24 News
Zimbabwe's economy continues to grow despite illegal sanctions imposed on the country by the West and the nation is now being rallied to support President Mnangagwa's vision of stabilising the local currency.
The call was made by the Zanu-PF national Secretary for Information and Publicity, Ambassador Chris Mutsvangwa during Mashonaland West's Provincial Coordinating Committee (PCC) meeting in Chinhoyi yesterday.
"Our economy is rising despite illegally imposed sanctions and some nations without sanctions are trailing behind us because of the works being done by the Second Republic," said Mutsvangwa.
"The wanton price hikes are uncalled for and are being peddled by our economic saboteurs and President Mnangagwa's political rivals.
"Regardless of the acts of destabilising the economy and our local currency, President Mnangagwa remains on top of the situation. We will have a stable currency because that is the last fight for our independence."
Zimbabwe's economy, he said, was on the rebound as a result of citizens' participation and the coming in of investors under the "Zimbabwe is open for business" mantra.
In her remarks, Zanu-PF Mashonaland West provincial chairman, Mary Mliswa-Chikoka, called for unity among party's cadres.
"Let's work for the party and President Mnangagwa's 2023 harmonised election resounding victory. We should also encourage our members and communities to embrace the current identification documents and voter registration exercises," she said.
The meeting also saw candidates vying for national Women's League positions successfully submitting their CVs, with Cdes Jennifer Mhlanga and Caroline Mugabe representing Makonde and Zvimba district, going unopposed.
Zanu-PF's Science and Technology Secretary, Ziyambi Ziyambi and Makonde District Coordinating Committee chairman, Kindness Paradza, were some of the people who attended the strategic meeting.